(tonga teto avy amin'ny Finoana bahay)
Ilay Persana atao hoe Mīrzā Ḥusayn-ʿAlī Nūrī (1817-1892), izay atao hoe Baha'u'llah taty aoriana, no nanorina ny finoana bahay tamin' ny taona 1863. Ny anarana hoe Baha'u'llah dia midika hoe "Voninahitr'Andriamanitra" izay atao amin' ny teny arabo mitovy dika amin' io hoe Bahāʾ-Allāh. Mpianatr'i Bahāʾ-Allāh ny mpino bahay. Ny finoana bahay dia manana foibetoerana mihoatra ny 100000 eran-tany ka ao Haifa no foibeny fara tampony. Tamin' ny taona 2011 dia niisa 7.000.000 any ho any ny mpino bahay izay avy amin' ny vahoaka na foko 2100 samihafa miparitaka amin' ny firenena 189 . Ny ivotoerana ara-panahy, izay nanaovana fivahiniana masina (ziyarat) sady ivotoeran' ny fitantanan-draharaha dia ao Haifa sy ao Acra any Israely.
Manaraka ny fizotry ny tanaran'ireo mpitarika ara-panahy azy ny tantaran' ny finoana bahay, ka nanomboka tamin' ny takarivan' ny 22 Mey 1844 izany, araka ny fanapahan-kevitry ny Bāb tao Shiraz ao Iràna, sady miorina amin' ny fototra ara-pitantantanan-draharaha napetrak'ireo olo-malaza ara-tantaran'ilay finoana. Tao amin'ny fanjakana iraniana sy otomàna foana ny fikambanana bahay ka tsy niova izany raha tsy tamin'ny nahafatesan'i Bahāʾ-Allāh tamin' ny taona 1892. Nivoatra tao Eorôpa sy tany Amerika Avaratra ilay fivavahana tamin' ny andron' i ʿAbd-al-Bahāʾ zanak' i Bahāʾ-Allāh, ary nihamafy orina tao Iràna izay toerana mbola izakany fanenjehana mafy ankehitriny. Tamin' ny nahafatesan' i ʿAbd-al-Bahāʾ tamin' ny taona 1921 dia niditra tamin' ny dingana vaovao ny fitarihana ara-panahy ny fikambanana, ka nivoatra avy amin' ny fitarihan' olon-tokana ho amin' ny fandaminam-pandraharahana izay ahitana olom-boafidy sy olom-boatendry.
Ny mpanorina ny finoana bahay, i Mīrzā Ḥusayn-ʿAlī Nūrī, dia teraka tao amin'ny faritanin'i Mazanderan any Iràna tamin'ny 12 Novambra 1817 tao amin'ny fianakavian'andriana iray. Niasa tao amin'ny governoran'ny shah ao Iràna ny rainy. Rehefa maty ny rainy dia saika hatao mpandimby azy ao amin'ny lapan'ny mpanjaka i Mīrzā Ḥusayn-ʿAlī Nūrī. Tsy nanaiky anefa izy mba hahafahany manokana ny fotoany amin'ny fanampiana ny olona ianjadian'ny tsindrihazolena sy ny marary ary ny mahantra, sady hiaro ny rariny. Nikambana tamin'ny babisma izy tamin'ny faha-30 taonany. Tamin'ny taona 1852 dia nosamborina izy sy nasesitany tany Bagdad izay niankina tamin'ny fanjakana otomàna.
Taorian'ny nahahatesan'i Bahāʾ-Allāh dia nafindra tamin'ny lahimatoany atao hoe ʿAbbās Effendi (1844-1921) ny fitantanana ny fikambanana bahay. Teraka tao Teheràna i ʿAbbās Effendi ary nambara fa ʿAbd-al-Bahāʾ ("Andevo miasa ho an' ny famirapiratan' Andriamanitra").
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahaisma&oldid=1001628"
Voaova farany tamin'ny 22 Febroary 2021 amin'ny 18:37 ity pejy ity.